ကပ်ဆေးခြင်းဘေး မှ လွတ်ကင်းကြစေရန် ဤဂါထာတော် ရွတ်ဖတ်ပါ – GuGuGarGar
Shwe | January 30, 2020 | Knowledge | No Comments
ကပ်ဆေးခြင်းဘေး မှ လွတ်ကင်းကြစေရန် “အဋ္ဌာန မေ တံ” ဂါထာတော် ရွတ်ပါ ။ ဤဂါထာတော်သည်ကား ….
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် ကို အရှင်ဒေဝဒတ် ကျောက်မောင်းဆင်၍ လုပ်ကြံပြီးကာစ ပုထုဇဉ်ရဟန်းတော်တို့က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် အတွက် စိုးရိမ်ကြသဖြင့် တုတ် တောင်ဝှေး စသည်တို့ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို အကာအကွယ်ပေးရန် စုဝေးရောက်ရှိလာကြရာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်က ကာကွယ်ပေးရန် မလိုကြောင်း ရှင်းလင်းမိန့်ကြားတော်မူရာတွင် တစ်ကြိမ် …၊
နောက်နေ့မြို့တွင်းသို့ ဆွမ်းခံကြွမည့် အချိန် နာဠာဂီရိ ဆင်ဆိုးကြီးကို အရက်တိုက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို လုပ်ကြံမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိတော်မူသဖြင့် ညီတော် အရှင်အာနန္ဒာက ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ရှေ့မှ ကြွသွားပြီး ဘုရားရှင်ကို အကာအကွယ်ပြုမည်ကို မလိုအပ်ကြောင်း အရှင်အာနန္ဒာအား မိန့်ကြားတော်မူရာတွင် တစ်ကြိမ် …၊
“ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် တို့၏ သဘာဝ မည်သူကမျှ မည်သို့မျှ ဘုရားရှင်တို့၏ အသက်ကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်၍ မရကြောင်း ဘုရားရှင်တို့သည် အချိန်တန်မှသာ မိမိတို့အလိုလိုသာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြရမြဲဖြစ်ကြောင်း” မိန့်ကြားတော်မူသော ဂါထာတော်ဖြစ်၏ …။
ဤဂါထာတော်၏ တန်ခိုးတော်သည် သက်တော်ရှည် စံကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး အိမ်ခြေတစ်ထောင်ကျော်ရှိသည့် စံကင်းရွာကြီး ပလိပ်ရောဂါကျရောက်နေ ရာ အကျဉ်းအကြပ်ထဲမှ ရွာသူရွာသားတို့၏ အသက်ဘေးအန္တရာယ်မှ ကယ်ဆယ်တော်မူခဲ့ရာတွင် ထင်ရှားတော်မူခဲ့၏ …။
(ယ္ခု မ ဟ န ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘဒ္ဒန္တကုမာရ အရွယ်ကောင်းစဉ်ကလည်း စံကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးက ထိုအကြောင်းမိန့်ကြား၍ အဋ္ဌာနမေတံ ဂါ ထာတော်နှင့် လူသားတို့၏အသက်ကိုကယ်ခါ သာသနာပြုရာ ပြုကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ဖူး၏ …။)
“အဋ္ဌာန မေတံ” ဂါထာတော်ကို အချို့ကလည်း “သဗ္ဗသိဒ္ဓိ “ဂါထာတော်ဟု အမည်ခေါ်ဝေါ်ကြ၏ …။
မည်သို့ဆိုစေ “အဋ္ဌာန မေတံ”ဂါထာတော် ကိုနေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ခြင်း၊ ပုဒ် ပါဒ်အက္ခရာ မှန်ကန်စွာရေးသား၍
အိမ်၏ ဘုရားကျောင်းဆောင် အိမ်၏ လေးဘက်လေးတန် အိမ်ဝင်ပေါက် အပေါ် စသည်တို့၌ရိုသေစွာ ကပ်ထားခြင်း …၊
မိမိ၏အိတ် ဦးထုပ် စသည်တို့၌ ရိုသေစွာ(ရိုသေစွာ) ဆောင်ထားခြင်း စသဖြင့် မိမိတို့ဉာဏ် ရှိသလို အကာအကွယ်ယူ ထားနိုင်ပါကြောင်း …၊
ထိုသို့ဂါထာတော်၏ အကာအကွယ်ကို ရိုသေ ယုံကြည်စွာယူထားခြင်းဖြင့် (ဝဋ်ကြွေးမှ မရှိလျှင်)လုံးဝ အန္တရာယ်ကင်းပါကြောင်း သူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျား …။
(ကျွန်ပ်ကိုယ်တိုင်-“အဋ္ဌာန မေတံ”ဂါထာ တော်၏ တန်ခို့းတော်ကြောင့် အသက်အန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ရပုံကို သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်းတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်က တစ်ကြိမ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်တိုင် ကိုယ်တွေ့အဖြစ်မှန်ဝတ္ထုတိုများအဖြစ်ရေးသားခဲ့ပါ၏ …။)
နေ့စဉ်မပြတ် ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်တော် မူကြပါ သူတော်ကောင်းတို့ …။ ။
ကပျဆေးခွငျးဘေး မှ လှတျကငျးကွစရေနျ “အဋ်ဌာန မေ တံ” ဂါထာတျော ရှတျပါ ။ ဤဂါထာတျောသညျကား ….
ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားရှငျ ကို အရှငျဒဝေဒတျ ကြောကျမောငျးဆငျ၍ လုပျကွံပွီးကာစ ပုထုဇဉျရဟနျးတျောတို့က ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားရှငျ အတှကျ စိုးရိမျကွသဖွငျ့ တုတျ တောငျဝှေး စသညျတို့ဖွငျ့ ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျကို အကာအကှယျပေးရနျ စုဝေးရောကျရှိလာကွရာ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားရှငျက ကာကှယျပေးရနျ မလိုကွောငျး ရှငျးလငျးမိနျ့ကွားတျောမူရာတှငျ တဈကွိမျ …၊
နောကျနမွေို့တှငျးသို့ ဆှမျးခံကွှမညျ့ အခြိနျ နာဠာဂီရိ ဆငျဆိုးကွီးကို အရကျတိုကျပွီး ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျကို လုပျကွံမညျဖွဈကွောငျး သိရှိတျောမူသဖွငျ့ ညီတျော အရှငျအာနန်ဒာက ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျ၏ရှမှေ့ ကွှသှားပွီး ဘုရားရှငျကို အကာအကှယျပွုမညျကို မလိုအပျကွောငျး အရှငျအာနန်ဒာအား မိနျ့ကွားတျောမူရာတှငျ တဈကွိမျ …၊
“ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားရှငျ တို့၏ သဘာဝ မညျသူကမြှ မညျသို့မြှ ဘုရားရှငျတို့၏ အသကျကိုလုပျကွံသတျဖွတျ၍ မရကွောငျး ဘုရားရှငျတို့သညျ အခြိနျတနျမှသာ မိမိတို့အလိုလိုသာ ပရိနိဗ်ဗာနျပွုကွရမွဲဖွဈကွောငျး” မိနျ့ကွားတျောမူသော ဂါထာတျောဖွဈ၏ …။
“အဋ်ဌာန မတေံ ဘိက်ခဝေ အနဝကာသော၊ ယံ ပရူပက်ကမနေ တထာဂတံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပယြေ၊ အနုပက်ကမနေ ဘိက်ခဝေ တထာဂတာ ပရိနိဗ်ဗာယန်တိ။” (ဧတနေ သစ်စဝဇ်ဇနေ သောတ်ထိမေ ဟောတုသဗ်ဗဒါ။)
ဤဂါထာတျော၏ တနျခိုးတျောသညျ သကျတျောရှညျ စံကငျးဆရာတျောဘုရားကွီး အိမျခွတေဈထောငျကြျောရှိသညျ့ စံကငျးရှာကွီး ပလိပျရောဂါကရြောကျနေ ရာ အကဉျြးအကွပျထဲမှ ရှာသူရှာသားတို့၏ အသကျဘေးအန်တရာယျမှ ကယျဆယျတျောမူခဲ့ရာတှငျ ထငျရှားတျောမူခဲ့၏ …။
(ယ်ခု မ ဟ န ဥက်ကဋ်ဌ ဆရာတျောဘုရားကွီးဘဒ်ဒန်တကုမာရ အရှယျကောငျးစဉျကလညျး စံကငျးဆရာတျောဘုရားကွီးက ထိုအကွောငျးမိနျ့ကွား၍ အဋ်ဌာနမတေံ ဂါ ထာတျောနှငျ့ လူသားတို့၏အသကျကိုကယျခါ သာသနာပွုရာ ပွုကွောငျး မိနျ့ကွားတျောမူခဲ့ဖူး၏ …။)
“အဋ်ဌာန မတေံ” ဂါထာတျောကို အခြို့ကလညျး “သဗ်ဗသိဒ်ဓိ “ဂါထာတျောဟု အမညျချေါဝျေါကွ၏ …။
မညျသို့ဆိုစေ “အဋ်ဌာန မတေံ”ဂါထာတျော ကိုနစေ့ဉျရှတျဖတျသရဇ်ဈာယျခွငျး၊ ပုဒျ ပါဒျအက်ခရာ မှနျကနျစှာရေးသား၍ အိမျ၏ ဘုရားကြောငျးဆောငျ အိမျ၏ လေးဘကျလေးတနျ အိမျဝငျပေါကျ အပျေါ စသညျတို့၌ရိုသစှော ကပျထားခွငျး …၊
မိမိ၏အိတျ ဦးထုပျ စသညျတို့၌ ရိုသစှော(ရိုသစှော) ဆောငျထားခွငျး စသဖွငျ့ မိမိတို့ဉာဏျ ရှိသလို အကာအကှယျယူ ထားနိုငျပါကွောငျး …၊
ထိုသို့ဂါထာတျော၏ အကာအကှယျကို ရိုသေ ယုံကွညျစှာယူထားခွငျးဖွငျ့ (ဝဋျကွှေးမှ မရှိလြှငျ)လုံးဝ အန်တရာယျကငျးပါကွောငျး သူတျောကောငျးတို့ခငျဗြား …။
(ကြှနျပျကိုယျတိုငျ-“အဋ်ဌာန မတေံ”ဂါထာ တျော၏ တနျခို့းတျောကွောငျ့ အသကျအန်တရာယျမှ လှတျမွောကျခဲ့ရပုံကို သူရဇ်ဇမဂ်ဂဇငျးတှငျ ၂၀၀၅ ခုနှဈက တဈကွိမျ ၂၀၀၈ ခုနှဈက တဈကွိမျ နှဈကွိမျတိုငျ ကိုယျတှအေ့ဖွဈမှနျဝတ်ထုတိုမြားအဖွဈရေးသားခဲ့ပါ၏ …။)
နစေ့ဉျမပွတျ ရှတျဖတျသရဇ်ဈာယျတျော မူကွပါ သူတျောကောငျးတို့ …။ ။